Nahoana no mivoaka ny voatabia (voatabia), antony fototra - Zavamaniry mihinana - 2019
Inona no tokony hatao raha mivoaka ny voatabiha
Matetika ny mpikarakara gardens dia mitandrina toy izany toy ny fanodinkodinan'ny ravina anaty voatabia.
Inona no mety ho antony, dia vakio ao amin'ny lahatsoratra ankehitriny.
Eritrereto ny fahadisoana
Fangatahana tsy mety
Famotehana ny rafi-pitantanana
Iray amin'ireo antony mahatonga ny ravinkazo ao anaty voatabia - tsy fahampian-tsakafo. Mangetaheta, ny zavamaniry dia manempotra ny hamamoana kely kokoa mba tsy ho faty, fa ny ravina kosa dia mihodina anaty sambo. Mba hanampiana ilay orinasa, dia ampy ny manondraka ilay zavamaniry matetika, fa vetivety ihany.
Paradox fa tondraka - Ny antony faharoa mahatonga ny ravinkazo ao anaty voatabia. Ny zavamaniry dia mety mijaly na dia noho ny fisotroan-toetrana voajanahary aza, ny ravin'io tranga io dia mihosinkosina ambony. Raha mijaly ny zavamaniry noho ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny tany, dia ilaina ny manatontosa asa amin'ny famahanana ny tany mba hihanahan'ny haavon'ny hafanana.
Ho an'ireo mpamboly mpanakorontana matetika ny fanontaniana mikasika ny antony mahatonga ny voatabia mivoaka ao anaty trano fandroana maitso, dia tsotra ny valiny. Ny antony fototra indrindra dia toetrandro tsy mahafa-po. Ny faritra ambany kokoa amin'ny tany dia matetika lavitra kokoa noho ny fiparitahan'ny setroka, noho izany dia ilaina ny handanjana ny mari-pana amin'ny alàlan'ny fandoroana ny trano fonenana.
Raha manomboka mihetsiketsika eny amin'ny tany malalaka ny ravina eo amin'ny voatabiha, Mafana fo izy ireo. Izany dia mitranga rehefa mihamitombo mihoatra ny 35 ° ny mari-pana. Ny hafanana toy izany dia miteraka fihenanam-bidy ny singa mahasoa, tsy afaka manararaotra azy tanteraka ny zavamaniry, ny fifadian-kanina dia mitranga ary, vokatr'izany, ny raviny maina, mitefoka, dia afaka manidina eny amin'ny loko. Mba hamonjena voatabia amin'ny alahelom-piainana toy izany, dia arahabao amin'ny urea: iray litatra eo ho eo isaky ny 10 litatra ny rano. Rehefa afaka telo andro sy telo andro, dia manaraha miaraka amin'ny permanganate potassium.
Antony iray mahazatra ny antony mahatonga ny voatabia mivoaka ao anatiny diso pasynkovanie. Ny dingana tokony atao dia indray mandeha na indroa isan-kerinandro, raha toa ka tratran'ny tsy fahita matetika, miandry tsiratsiraka, dia hahatsapa ny adin-tsaina ny orinasa noho ny habetsahan'ny tifitra lavitra.
Zava-dehibe izany! Tsara ny manatontosa ny fandevenana amin'ny andro manorana: noho izany dia manasitrana haingana kokoa ny ratra. Raha toa ny rahona isak'izay mitranga ary tsy maintsy mandeha tsy misy masoandro, aorian'ilay dingana, dia tapaho ny fery amin'ny hazo lavaka.
Ny fanodinana tsara dia manasongadina ny dingana voalohany ao anaty kirihitra mahasalama, mamela ny malemy sy ny ahiahiny amin'ny manaraka, ka manala ireo aretina avy amin'ny voatabia ary manodina ny raviny avy amin'izy ireo. Ho mora kokoa ny hiatrehana ny adin-tsaina voatery halefa amin'ny zavamaniry brynostimulant.
Fantatrao ve? Ny fandinihana ny firafitry ny voatabia dia mampiseho ny fisian'ny lycopene ao aminy. Ny vatan'olombelona dia tsy afaka mamokatra io zavatra io, izay ratsy, satria ity singa ity, izay antioxidant, dia manohana ny rafi-pandrefesana sy ny fomba fisorohana ny homamiadana. Araka ny voalazan'ny mpahay siansa, ny fihinanana tsy tapaka voatabiha na saosy avy amin'izy ireo dia mampihena ny mety ho voan'ny kansera.
Ny fandroana dia ara-dalàna, ny dian-tongony araka ny fitsipika, ny toetrandro dia ekena azo ekena - nahoana no mbola mipoitra ny tomato? Ny zava-drehetra dia mety ho eo amin'ny fitafy, Ny tsy fahampiana na ny tsy fahampian'ny singa iray dia miteraka fanehoan-kevitra mampalahelo amin'ny voatabia.
Ny habetsaky ny zinc dia miseho amin'ny loko volomparasy amin'ny ampahany ambany amin'ny takelaka vy ary manodina ny sisiny. Ny manganese betsaka dia hahatonga ny loko ravina mamirapiratra sy ny loko marefo.
Ny fihenan-kiran'ny ravin'oliva dia mampiseho ny tsy fisian'ny solifara, varahina na boribory. Raha reraka ny ravina - tsy ampy ny calcium, raha tsy ampy ny phosphorus, ankoatra ny fanodinana, ny ravina dia maka volombava. Mba hisorohana ny vokatra mampidi-doza, manaova fanazaran-tena mifandanja tsara, ohatra, ny monophosphate potassium na "Dissolved".
Fampitandremana! Tsy voatery hisakafo be na voamaina lavalava ny ankamaroany, misy amoniaka be dia be izy ireny, izay manosika ny hoditry ny hazo sarobidy sy ny voankazo.
Nahoana ny ravina no mihodidina manodidina ny voatabia ary inona no tokony hatao? Mety hitranga izany Nihanitombo ny zana-ketsa, ary rehefa simba ny fototarazo, dia simba ny fakany. Tsy mila manao na inona na inona momba izany ianao, tokony hanome fahafahana ny zana-boary hahasitrana, atsaharo ny sakafo. Ankehitriny dia zava-dehibe ho an'ny fambolena ny fanamafisana sy fanasitranana ny fototry ny fotony, ary tsy hamolavola volombava mamono, noho izany, raha vantany vao miverina ny fakany, ny ravina dia haka endrika ara-dalàna.
Interesting! Zaza tomato dia marinade lehibe ho an'ny kebabs. Ny voankazo amin'ny voatabia dia ahitana siny izay azo antoka ho an'ny vatan'olombelona ary manana fironana hanalefahana ny vatana amin'ny vokatra.
Tokony hijery ny zavamaniry ianao ny fisian'ny parasy. Ny siramamy, ny papel ary ny mavo mena dia matetika milahatra eo amin'ny tendrony avaratry ny ravin-tsavony, mamelona ny sipa ao amin'ilay zavamaniry - misotro rano fotsiny avy eo. Mandritra izany fotoana izany dia mihosotra ny zavamaniry, manjavozavo amin'ny toerana, mivonto ny ravina.
Vantany vao mahita ny bibikely, dia atsipazo ireo voatabia. Mba hanaovana izany, dia mety ny fanafody toy ny "Alatar", "Biotlin", "Fufanon". Ny bibikely manohitra ny bibikely sy ny vokatra mahomby: ny fampidiran-drongony an-dranomandry, ny fampiasana ny tongolo gasy amin'ny alikaola sy ny hafa.
Ny aretina izay mahatonga ny lelany hanjavona amin'ny voatabia - homamiadan'ny bakteria. Miseho eo amin'ny plastika ny rongony, ary ny rotsak'ireo vato. Mety ho lasa mavo sy maina ny faritra avo amin'ny voatabia. Ireo soritr'aretina ireo dia mety miteraka mozika paraky sy sigara sy paraky. Ireo aretina azo avy amin'ny virosy dia vokatry ny voan'ny otrikaretina na ny otrik'aretina sisa ao amin'ny tany, ary koa tompon'andraikitra amin'ny ravin-kazo efa napetraka. Mampalahelo fa tsy voatsabo ireo aretina ireo, ka tsy maintsy esorina amin'ny zaridaina ireo zavamaniry ireo mba hiarovana ireo olo-mahasalama sy handoro azy ireo. Mora kokoa ny mandray fepetra fisorohana ho an'ireo aretina ireo: ny fanadiovana lalina sy ny famadihana ny toerana aorian'ny fijinjana; misafidy ny mpialoha lalana; famafazana voa sy tany alohan'ny fambolena (Fitolavin-300).
Ny famoahana ny ravin'ny voatabia dia tsy mitaky ny fitsaboana. Alohan'ny famafazana, mamafy, mamaky ireo toetra mampiavaka ny voatabia voatokana: Ny fehezam-boninkazo dia mety ho fitsipika. Ohatra, io endri-javatra io dia tomato samihafa "Cherry".
Tsiambaratelo momba ny fambolena raozy eo amin'ny vatan-kazo
Ny teknolojia fanangonam-bokatra avy any Beijing tany am-boalohany, kilaometatra sy broccoli tao amin'ny trano fonenana tsy misy hafanana
Tena tsara sy salama tsara. Marinina voatokana hohanina amin'ny voninkazo
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Inona no tokony hatao raha mivoaka ny voatabiha